Wararka - Laanta Gobolka Sabah ee Rugta Malaysiya ayaa booqata Mr.huolang
May 23, 2019, Xoghayaha Guud Chen Weiyu ayaa hoggaaminayay kooxda, iyo Mr. Liu Shuntai, Madaxweyne ku-xigeenka Su Xiaofeng, Madaxweyne ku-xigeenka Liu Shoujian, iyo Ku-xigeenka Xoghayaha Guud Chen Qiulin iyo wefdiga 22 xubnood oo ka tirsan Rugta Shiinaha ee Malaysia of Commerce booqasho iyo kormeer Mr.huolang. Mr. Zhou Jianqiao, oo ah guddoomiyaha Mr.huolang, ayaa si shakhsi ah u qaabilay guddoomiyaha Liu Shuntai iyo xisbigiisa.
Saddexdii galabnimo ayaa xubnihii weftigu soo gaadhay xarunta Mr.huolang. Mr. Zhou Jianqiao ayaa soo bandhigay hoolka bandhigga iyo xaaladda hoolka bandhigga, qaabka silsiladda sahayda, iyo horumarinta summadaha madaxbannaan. Wuxuu sheegay in Yiwu badeecadaha yaryar ay yihiin kuwo dhammaystiran oo si dhakhso leh ugu kora adduunka.
Mr.huolang wuxuu ku yaal degmada shanaad ee Magaalada Ganacsiga Caalamiga ah ee Yiwu. Waxay ururisaa macluumaadka suuqa ugu badan ee ku saabsan wax soo saarka, isticmaalka, iyo wareejinta badeecadaha yaryar
Mr.huolang wuxuu ku xiray Yiwu iyo xitaa isha waxsoosaarka badeecadaha yar yar ee dalka, isagoo xaqiiqsaday iskuxirka tooska ah ee badeecadaha warshadda ilaa macaamilka, fududeynta silsiladda sahayda, si weyn hoos u dhigidda kharashaadka wax soo saarka, iyo sidoo kale dedejinta badeecadaha galaya suuqa. Faa'iidadani way ka fiican tahay silsiladda sahayda dukaamaysiga ee caadiga ah.
Zhou Jianqiao ayaa sidoo kale sheegtay in tobanaan kun ee SKU ee hadda ku jira hoolka bandhigga ay yihiin badeecooyin aad u wanaagsan oo soo haray sanado badan oo baaritaan joogto ah iyo isbeddel.
Si kastaba ha ahaatee, marka la eego kala duwanaanshaha caadooyinka nololeed ee shisheeyaha iyo caadooyinka isticmaalka, alaabtayada ayaa u baahan xulasho dheeraad ah. Mr.huolang wuxuu dardar gelinayaa horumarinta badeecadaha sumadda leh, wuxuu mideynayaa naqshadaha iyo qaababka baakadaha wax soo saarka, wuxuuna u dhisayaa saldhig adag iyo xoog suuqa caalamiga ah.
Intaas ka dib, labada dhinac waxay ku yeesheen kulan wada hadal qolka shirarka ee dabaqa saddexaad si ay isu dhaafsadaan aragtiyaha iyo sahaminta qaababka iskaashiga. Bilowgii kulanka, Guddoomiye Zhou Jianqiao wuxuu u muujiyey soo dhaweyn diirran dhammaan martida wuxuuna u soo bandhigay Mr. Liu Shuntai qaabka ganacsiga, dulmarka suuqa, xaaladda ganacsiga, faa'iidooyinka ganacsiga iyo qorshayaasha horumarinta mustaqbalka. dhegeysiga ka dib, Madaxweyne Liu Shuntai wuxuu aad ugu riyaaqay horumarka Mr.huolang.
Zhou Jianqiao ayaa carrabka ku adkeeyay in aadidda suuqa caalamiga ah ay tahay jihada guud ee horumarka mustaqbalka ee Mr.huolang.
Sannadkii 2017, shirkaddu waxay bilowday inay qorshayso furitaanka suuqyada shisheeye, waxayna xarunteedii u rartay suuqa shan-aag ee Magaalada Ganacsiga Caalamiga ah, iyadoo si buuxda u xidhatay ganacsatadii caalamka oo ay la qabsanaysay suuqa caalamiga ah.
Waqtigan xaadirka ah, Mr.huolang wuxuu u hormarinayaa istaraatijiyadda caalamiga ah si habsami leh, isagoo si firfircoon uga jawaabaya wicitaanka qaranka ee “Suunka iyo Wadada”, Mr.huolang wuxuu aasaasay unug ganacsi oo dibedda ah wuxuuna macaamiisha ka qaataa Vietnam, Myanmar, Indonesia, iyo dalal kale si wada jir ah u wada shaqeeyaan si ay u sahamiyaan suuqyada caalamiga ah ee Koonfur Bari Aasiya iyo Koonfurta Aasiya. Dukaamada waaxdu waxay keeni doonaan badeecadaha maxalliga ah, isla markaasna, waxay kaloo soo bandhigi doontaa badeecado khaas ah oo maxalli ah si loo daboolo baahiyaha suuqa macmiilka gudaha ah loona gaaro dheef iyo horumar wadajir ah.
Dood -cilmiyeedka waxaa ka buuxsamay qosol iyo farxad, taas oo sidoo kale saldhig adag u noqotay iskaashi wanaagsan oo dheeraad ah. Sababtoo ah fursadda booqashada Madaxweynaha Rugta Ganacsiga Shiinaha ee Malaysia, Laanta Gobolka Sabah, Liu Shuntai, Mr.huolang wuxuu sugayaa inuu xoojiyo xiriirka iyo xiriirka labada dhinac wuxuuna rajeynayaa in si wadajir ah loo horumariyo suuqa Malaysia, oo u keen Mr.huolang “tayo sare iyo qiimo qurxoon” macaamilka Malaysia.